Ungawathengisa njani amagama akho eDomain | Martech Zone
Uthengisa njani amagama akho eDomain
NgoMgqibelo, Disemba 24, 2016 NgoLwesithathu, uDisemba 28, 2016 Douglas Karr
Ukuba ufana nam, uyaqhubeka nokuhlawula loo mali yokubhaliswa kwegama lesizinda rhoqo ngenyanga kodwa uzibuze ukuba uza kuyisebenzisa na okanye ukuba ukhona umntu oza kuqhagamshelana nawe ayithenge. Kukho iingxaki ezimbalwa apho, kunjalo. Okokuqala, hayi… awuzukuyisebenzisa. Yeka ukuzidlahlekisa, kukuxabisa nje isixa semali minyaka le kungekho mbuyekezo kutyalo-mali. Okwesibini, akukho mntu waziyo ukuba uyayithengisa-ke uza kuzifumana njani izibonelelo?
Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, le nkqubo yayikukujonga i-domain kwi-whois, ichonge ukuba yeyiphi na umniniyo, emva koko uqalise umdaniso wokubonelelwa kunye nokunikezelwa. Nje ukuba uvumelane ngexabiso, kuya kufuneka uqale iakhawunti yokunyuka. Liqela lesithathu eligcina imali ukuqinisekisa ukuba idilesi idluliswa ngokufanelekileyo. Ngelo xesha, i-akhawunti yokunyuka ikhupha imali kumthengisi.
Kulula kakhulu ngoku. Sebenzisa inkonzo efana Amagunya endawo, Ungadwelisa yonke imimandla yakho kwinkonzo yabo. Bathatha isuntswana elisempilweni lentengiso, kodwa bayadibanisa indawo yokukhangela, iphepha lokufika ngokwesiqhelo, kunye neakhawunti yokungena yonke phantsi kweqonga elinye. Oku kwenza ukuba kube lula ukufumana indawo yakho ethengiswayo.
Ingaba ulunde ntoni? Yongeza zonke ezingasetyenziswanga (kunye nezasetyenzisiweyo) ngoku:
Fumana okanye uthengise igama lakho leDomain
Ulicwangcisa njani ixabiso lokubuza indawo yakho?
Kudala ndiyenza le nto kwaye ngumbuzo onzima lowo. Umthengisi unokubona ukuba yinkampani okanye umthengi osisityebi othengayo kwaye axoxisane ngexabiso elikhulu lokuthenga. Okanye umthengisi unokuba engenalwazi kwaye avumele igama elikhulu lesizinda ukuba lihambe nantoni na. Sithengile sathengisa itoni yamagama esizinda kwaye ihlala iyimeko yoxinzelelo. Kukho imigaqo elula efana nemimandla emifutshane engenadeshi okanye amanani ahlala esenza kumnandi. Amagama ama-domain amade anamagama angabhalwanga kakuhle awenzi nawo.
The TLD .com isenexabiso ngakumbi kuba lilinge lokuqala ngaphakathi kukhangelo okanye isikhangeli ukufumana indawo. Ukuba i-domain eneneni yayinomxholo kwaye yaqhuba iziphumo zokukhangela (ngaphandle kokuba iyindawo ye-malware okanye iphonografi), kunokuba yinto efanelekileyo kwinkampani izama ukuqhuba itrafikhi eyongezelelweyo okanye igunya kwigama labo.
Umthetho wethu wesithupha unyanisekile kuthethathethwano. Ndiya kuhlala ndicebisa ukuba umthengi enze ibhidi yokuqala yokubonelela umthengisi ngempendulo kwangoko malunga nokuba intengiselwano izakulunga na. Njengomthengi, sinokuxela ukuba siyathenga egameni lomntu wesithathu kuba banqwenela ukubonelela ngexabiso elifanelekileyo ngaphandle kokuhlawula kakhulu. Sikwazisa umthengisi ukuba sinqwenela ukuhlawula oko kufanelekileyo ngaphandle kokukrazula umthengisi. Ekupheleni kwengxoxo, omabini amaqela ahlala onwabile.
Bakc ukuya Amagunya endawo. Ngokuhlaziya i-DNS yam kwigama lam lesizinda, ii-DomainAgents zibeka iphepha elikhulu lokufika ukwenza i-domain ukuba ithengwe lula. Nanku umzekelo omkhulu, jonga indawo yam enye - idilesi.com.
Nantsi eminye imimandla esiyithengisileyo, ezinye zilungile kwaye zimfutshane, ezinye ziyathandwa (kwaye ezona zinikiweyo zibalulekile).
Ukubhengezwa: Sisebenzisa amakhonkco ethu amanyeneyo Amagunya endawo kuyo yonke le post.
tags: ukuthengisa domainizibonelelolixabisa malini igama lakho lesizindanjani ukuba ixabiso igama domainindlela yokuthengisa igama lesizindathengisa isizindathengisa imimandlatld
IBrand24: Sebenzisa ukumamela ekuKhuselweni nasekuKhuleni kwiShishini lakho
Ungalisebenzisa njani iphepha leShishini kuFacebook
Iinkonzo zeComputech Tech
Dec 29, 2016 ngo-8:56 PM
Iposti egqwesileyo enengcebiso enkulu. Kubiza imali eninzi ukulahla loo mimandla ingasetyenziswanga kunokuhlala uhlawula imirhumo yereg rhoqo ngonyaka.